Sampana Sekoly Alahady – FPMA Dijon
« Inona no hiarovan´ny zatovo ny làlan-kalehany tsy ho voaloto? Ny fitandremana araka ny teninao. » Salamo 119: 9
Fototra ijoroan’ny SEKOLY ALAHADY (SA)
Ny SA no hoavin´ny fiangonana. Koa mila karakaraina, dieny izy vao kely izao, araka izay mba hanana anjara toerana eo amin´ny fiainan´ny ankizy madinika ny Tenin´Andriamanitra, ka ho tena ho fiainany izany, araka ny tenin’ny Soratra Masina hita ao amin’ny Ohabolana 22:6 « Zaro amin´ izay làlana tokony halehany ny zaza fa rehefa antitra izy dia tsy hiala amin´izany. »
Ny fitoriana ny Filazantsara amin´ny ankizy dia mba hahafantarany fa izy dia zavaboaharin´Andriamanitra, manana ny endrik´Andriamanitra ao anatiny, ary zaza tiana. Ary Jesosy Kristy dia tia ny ankizy koa, izany hoe manana anjara amin´ny fiainana mandrakizay izy.
Izay rehetra ao anatin´ny SA dia samy miara-mientana hanatontosana izany. Koa toy izao ny endrika isehoan´ ny fomba hanatanterahana ny fampitàna ny fampianarana SA ho an’ny madinika : hira, famakiana ny Soratra Masina, fampiasana fitaovana maro isankarazany (CD, coloriage, bricolage, peinture, …), fiarahana mivavaka, goûter.
Marihina fa misy ny fiofanana karakarain’ny foibe ho an’ny mpampianatra SA isan-taona ka mandray anjara amin’izany ny tafo Dijon. Izany moa dia natao mba hahafahan´ny mpampianatra mahay mampita amin´ny ankizy madinika ny fampianarana.
Aorian’ny fotoam-pivavahana hatrany no hananterahana ny fampianarana.
Fandefasana fanasana manokana ho an´ireo namantsika manan-janaka mba ho tonga hiara-mivavaka amintsika
Fandraisana anjara amin’ny “Rencontre Nationale” Sekoly Alahady FPMA (RN SA)
26 Oktobra 2016 : Alahadin’ny Sekoly Alahady + Hetsika fitadiavam-bola « vente barquette »
25 Desambra 2016 : Fety krismasy hazo Noely
18 Martsa 2017 : Fiofanana Mpampianatra S.A tany Grenelle Paris
6, 7, 8 Mey 2017 : RN SA any Sainte-Tulle Aix-en-Provence